Wadooyinka Muqdisho oo maalintii 3-aad xiran iyo dadka oo lugeynaya |
Wadooyinka Muqdisho oo maalintii 3-aad xiran iyo dadka oo lugeynaya
Wadooyinka magaalada Muqdisho ayaa maalintii saddexaad xiran, iyadoo dadweynaha ay yihiin kuwo lugeynaya oo cagtooda maalaya, waxaana dhinacyada wadooyinka taagan ciidamo ka tirsan dowladda oo la garwaaxsan qoryaha AK47.
Saaka oo ah maalin sabti ah oo ay dadku u kalahayeen goobahooda shaqo, ardaydana ay aadayeen goobaha waxbarashada ayaa la arkayay, iyagoo dadka lugeynaya.
Ciidamada ayaa meelaha qaar u diidaya inay dadka ka soo ag dhawaadaan, sida wadada gasha Air Porka, wadada hor marta Madaxtooyada iyo hareerihiisa.
Dadka qaar ee wadada maraya ayaa lagu amrayaa inay shaararka kor u qaadaan, si loo ogaado hadii ay hub wataan iyo hadii kale.
Xirnaanshaha wadooyinka Muqdisho oo soo bilaabatay maalintii Isniintii ayaa xitaa waxaa wadooyinka loo diidayaa mas’uuliyiinta dowladda.
Dhinaca kale magaalada ayaa wali ka socota diyaar garow lagu soo dhoweynayo Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan, kadib markii safarkii shalay la filayay inuu ku yimaado Muqdisho uu ka baaqday, isagoo aaday aaska Boqorkii Sacuudiga Boqor Cabdalla.
Madaxweynaha Turkiga ayaa xalay gaaray dalka Jabuuti, waxaana maanta la filayaa inuu la kulmo Madaxweynaha dalka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle oo ay kala saxiixan doonaan heshiisyo kala duwan oo ganacasi ah.